Home Wararka Qarax ka dhacay gudaha degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe
Qarax ka dhacay gudaha degmada Balcad ee Gobolka Shabeellaha Dhexe
Sida ay sheegyaan Weerarka ka imanaya degmada Balcad qarax ka dhacay gudaha degmada Balcad. Qaraxaas ayaa jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha degmadaas. Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka la geliyo ee laga hago meelaha fog-fog ayaa lagu aasay afaafka hore ee Dugsi sare ee uu ku yaalla Balcad, waxaana Iskuulka ka socday Imtixaanka fasalka 8-aad ee Dugsiga Dhexe oo ay qaadeyso Hirshabeelle.
Dhanka kale, dad ku sugan Balcad ayaa sheegay in qaraxaas uu dhaawac kasoo gaaray oo kaliya hal Askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, isla markaana sugayay amniga Iskuulka uu hortiisa qaraxa ka dhacay. Askariga ayaa la sheegay inuu gacan ka jabay, isagoona loo soo qaaday dhinaca Magaalada Muqdisho, si loogu daaweyo, mana jiro khasaaro kale oo laga soo weriyay qaraxaas ka dhacay degmada Balcda.